Yenza kusebenze imodi engaxhunyiwe ku-inthanethi ku-Google Chrome | Kusuka kuLinux
Yenza kusebenze imodi engaxhunyiwe ku-inthanethi ku-Google Chrome
Ezweni lakithi, i-intanethi ekhaya iyinto efana nokuncane kakhulu, cishe ayikho, labo esinenhlanhla yokufinyelela kwinethiwekhi yamanethiwekhi ezikhungweni zethu zomsebenzi, lapho sizulazula namakhompyutha noma ama-laptops ethu, sibheka imininingwane isidingo, siyafunda, njll.
Ngeshwa lapho sifika ekhaya izinguquko zangempela, uma sinokungabaza noma imibuzo asikwazi ukuvula i-Google noma i-Wikipedia futhi sixazulule inkinga, yingakho inketho yokuzulazula ungaxhunyiwe ku-inthanethi noma "Ukusebenza ungaxhunyiwe ku-inthanethi" efaka iziphequluli ezifana ne-Opera noma i-Firefox yithi ilusizo impela.
1 Yini imodi engaxhunyiwe ku-inthanethi noma esebenza ngokungaxhunyiwe ku-inthanethi?
2 Ungayisebenzisa kanjani imodi engaxhunyiwe ku-inthanethi ku-Google Chrome noma ku-Chromium
Yini imodi engaxhunyiwe ku-inthanethi noma esebenza ngokungaxhunyiwe ku-inthanethi?
Ake sithi usehhovisi bese uvula isifundo lapha ku-FromLinux, usifunde, uvale ithebhu yesiphequluli bese u-voila, uya ekhaya.
Lapho-ke lapho sifika ekhaya sifuna ukuvula leso sifundo esisithola lapha, ngeshwa njengoba singenayo i-intanethi ekhaya asikwazi ukufinyelela kusayithi, kulapho kungena khona imodi engaxhunyiwe kwi-inthanethi.
Sisebenzisa imodi yokungaxhunyiwe ku-inthanethi noma esebenza ngokungaxhunyiwe ku-inthanethi esipheqululini sethu futhi singafinyelela amakhasi esiwavule ngaphambi kokungena kwe-inthanethi, lokhu kungenzeka ngoba isiphequluli esikhundleni sokusesha i-inthanethi ekhasini nokuqukethwe esifuna ukukuvula, siyasesha kulwazi aseluvulile futhi analo enqolobaneni yakhe.
Ngale ndlela singabonisana namakhasi wethu we-Google Chrome (noma i-Chromium) esiwavule ngaphambilini futhi sifuna ukubuye sixoxe ngaphandle kokuba ne-intanethi, ngakho-ke ngokwesibonelo singabheka izindatshana ezivela kwaLinux, amanani entengo Linio, I-Arch Wiki noma njll, konke lokhu kungaxhunyiwe ku-inthanethi, kulusizo impela?
Ungayisebenzisa kanjani imodi engaxhunyiwe ku-inthanethi ku-Google Chrome noma ku-Chromium
Ekusebenziseni iFirefox kulula, siya kwimenyu yefayela bese siyithola ekugcineni, ku-Opera efanayo, kepha… kuGoogle Chrome asikwazi ukuthola le nketho ekuqaleni.
Ukuyenza isebenze sibhala okulandelayo kubha yokuzulazula bese ucindezela u-Enter:
Kuzovela iphosta isibuza ukuthi sifuna ukunika amandla imodi yokugcina i-offline, sichofoza kuyo Nika amandla futhi voila, lapha ngikukhombisa:
Ngemuva kwalokho siqala kabusha isiphequluli futhi yilokho kuphela.
PD:… Uzobona ukuthi kunezinketho eziningi ongazisebenzisa noma uzenze zingasebenzi, udlale ngazo kancane, kukhona okuthakazelisa kakhulu some
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Yenza kusebenze imodi engaxhunyiwe ku-inthanethi ku-Google Chrome
Ngisebenzise le nketho isikhathi eside kepha ngiyenzile kwiMozilla Firefox ukuze ngifunde izindatshana esisebenzisa i-linux eshicilelwe. Halala!
Iwusizo kakhulu uma unoxhumo lwe-inthanethi olubi noma olungena ngezikhathi ezithile.
Kulula ukufinyelela nge mayelana: cishe futhi ngenxa yalokho uvikela izinkinga lapho ufinyelela amakhasi afihliwe wesiphequluli.
UJonathan Martinez kusho
Mngani wami, lowo akaveli kimi, lawa angezansi avele nje
Phendula uJonathan Martinez
Manje usungahlola Ubuntu kusuka kusiphequluli sakho sewebhu